Immisa lacag ah Spotify
4 rikoorrada Spotify
7 Alternative for Spotify
Sida badeecadda kale oo kasta ama online adeeg Spotify hubiyaa in eedaymahaasi ay yihiin ayaa lagu eedeeyay sida ay u baahan yihiin iyo baahida user iyo sida uu xirmo in loo doortay in arrintan la xiriira. Tutorial waxaa loo qoray si ay u hubiyaan in user helo ugu fiican oo gobolka ka mid ah natiijooyinka tahay mar ay mari doontaa tutorial sida waxa loo qoray si iftiiminaya user sida ay ku soo oogay iyo fikradaha ah in shirkadda ay isticmaalaan oo dhan adduunka si loo hubiyo in dakhligu joogto ah la ahbaa.
Qaybta 1aad: Waa imisa kharashka Spotify
Qeybta 2: qaababka xubnaha Spotify
Waxaa jira baakadaha in ay diyaar u yihiin kala duwan ee adeega iyo user waa in la hubiyo in mid ka mid ah ugu wanaagsan ee la doorto sida ugu baahida iyo rabitaanka qofka sameeyo. Waxaa sidoo kale in la xuso in ay soo socda ayaa qaar ka mid ah baakadaha ugu badan ee Spotify ee la xiriirta in ay ballaarinta dhawaan oo gobolka ka mid ah adeegyada tahay in la bilaabay in ay nabadeeyaan users ah. Waxaa sidoo kale in la xuso in dhimis xayaysiinta ayaa sidoo kale ay bixiso shirkadda in dadka isticmaala ay laakiin waxaa jira NO dhimis baakadaha shirkadda oo dhan baakadaha waxaa lagu dalacayaa caadiga ah. Waxaa isku mid ah ayaa sidoo kale lagu xusay website-ka rasmiga ah ee shirkadda halkaas oo laga daawan karaa hoos imaanayso binta iyo qorshayaasha.
Xirmo 1. Trial
2. Xirmo Premium
3. Xirmo Ardayga
4. Xirmo Family
5. Qiimaha in dal oo kala duwan
Marka laga reebo kuwan ma jiraan baakadaha kale ee la bixiyo si user ah iyo sidoo kale waa in la ogaadaa in si loo hubiyo in user helo gobolka ugu wanaagsan oo ah macluumaadka ku tahay qaybaha dambe ee tutorial waxaa buuxiyeen ilaa la macluumaadka la xiriira shirkadda iyo weliba hubinayaa in user helo natiijada ugu wanaagsan oo aan wax arrintan iyo dhibaato.
Baakadaha ayaa sidoo kale waxaa looga hadli doonaa si faahfaahsan u weyn si loo hubiyo in user helo macluumaadka sida doonistii iyo rabitaan iyo haddii account Spotify waa in la doortay ka dibna waa loo dalxiis hore iyo intii dambeba ee user meesha macluumaadka oo dhan ayaa laga ururiyay si loo hubiyo in user aan la wada cafiyo oo keliya, laakiin sidoo kale uu helo ugu fiican oo gobolka ka mid ah adeegyada farshaxanka. Iyadoo saxiixin Spotify ee user waa in la hubiyo in isticmaalka bil kasta waxaa sidoo kale loo arkaa oo u user helo habka ugu wanaagsan ee loo hubiyo in diinta ay naga hor dhamaadka aboor baa aanay jirin xog gaartay dhacdaa. Waxaa sidoo kale in la xuso in user waa in sidoo kale la hubiyo in qorshaha qoyska la soo iibsatay kaliya haddii tirada songs in ay tahay in la maqlo waa heer sare ah. Tutorial ayaa sidoo kale hubin doona in user helo macluumaadka ugu wanaagsan ee ku saabsan kharashka barnaamijyada la bixiyo karoos xadka si dadka gaarka ah ee dalka ayaa sidoo kale faa'iido ka tutorial heli kartaa.
Xaqiiqdii waa lacag la'aan laakiin user ay u baahan tahay in la hubiyo in credit card ama habka lacag bixinta waxaa ka diiwaan gashan si mustaqbalka marka Times waa in la cusbooneysiiyaa waxaa laga jari karaa habka bixinta in uu ahaa Mudanayaasha iyo haddii user ma doonayo adeegga si aad markaas u cusbooneysiin hubiyo in xirmo maxkamadda la joojiyo mar taariikhda ah wajiyadii cusboonaysiinta uu ka dhigi karaa. Waxay kuu ogolaaneysaa in user si aad u hesho adeegyada ugu fiican oo sidoo kale u saamaxayo inuu u badbaadin kharashka. Waa lacag la'aan ah muddo 30 maalmood ah,
Waa mid ka mid ah qorshaha ugu isticmaalay oo si weyn loo aqoonsaday ee Spotify. Waxay ka dhigaysa hubiyo in user hal qanacsan yahay oo aan wax ka kaaftoomi iyo kharashka u kacay. Waxaa sidoo kale wuxuu hubiyaa in ugu fiican oo gobolka ka mid ah adeegyada farshaxanka waxaa lagu diirsaday by a user arrintan la xiriira si ay u hubiyaan in user helo natiijada ugu wanaagsan. Si wanaagsan u isticmaasho qorshaha waxaa lagula talinayaa in ay ku iibsadaan sida baahida iyo baahida loo qabo iyo waxaa suuro gal ah in qorshaha hal shaqayn karo baahida laba fudayd.
3. qorshe Student
Waxaa jira sicir-dhimis ah 50% qorshaha caymiska kor ku xusan si aad u hubiso in qorshaha ardayga waa la dhisay. Waxaa sidoo kale wuxuu hubiyaa in user helo ugu fiican oo gobolka ka mid ah muuqaalada tahay oo lacag la'aan ah. Si kastaba ha ahaatee si aad u hesho qorshaha waxaa lagula talinayaa in ay hubiyaan in cadeyn ah in ardayga la saxafadeed shirkadda iyo sabab la mid ah, waa in la ogaadaa in aan caddayn taasi suurta gal ma aha in la helo xubin ardayga iyadoo ay jirto wado kale oo arrintan la xiriira:
4. Qorshaha Qoyska
Qorshahan waxaa loo sameeyay si loo hubiyo in ugu fiican oo gobolka ka mid ah adeegyada farshaxanka waxaa la siiyaa qoysaska jecel yihiin inay maqlaan music wadajir. Waa mid ka mid ah qorshaha ugu fiican iyo sabab la mid ah waxa ay sidoo kale hubineysaa in baahida qoyska yar cafiyo in sida uga wanaagsan ee suurto gal ah. Guud ahaan eedeeyay Times la xidhiidha qorshaha qoyska waxa ay kala yihiin zilch marka ay timaado qaababka in lagu gundhig in la hubiyo in user helo ugu fiican iyo kan gobolka ee wax farshaxanka sameeyo qorshe xadidan oo bixisa in ka badan:
5. Qiimaha Spotify ee dalal kala duwan
Sidoo kale waa mid ka mid ah fikrado ah oo hubiyo in user helo ugu fiican oo gobolka ka mid ah natiijooyinka tahay in arrintan la xiriira ka dhigi lahaa. Waa in la ogaadaa in user ah waa in sidoo kale la hubiyo in adeegyada Times in baadhay online ay dalka ayaa baadho si aan weli ka jirin la hubin. Diiradda guud ee Spotify waa in la hubiyo in qorshaha qoyska u gudbaan intii suurto gal ah sida ay keeni karto in ay dakhli cabsi badan iyo sare. Sidoo kale waa in la ogaadaa in tan iyo bishii November 2014 qorshaha aan xad lahayn ayaa laga saaray. Hoos waxaa ku qoran qiimaha qaar ka mid ah qorshaha qoyska ee dalalka caan ah oo adduunka ah. Isha waa http://www.cnet.com/news/spotify-rolls-out-family-feature-separate-accounts-one-bill/
Qorshaha Spotify Qoyska
Qoyska 2 (mid account dheeraad ah)
Qoyska 3 (laba xisaab dheeraad ah)
£ 20 $ 20 AU $ 24 $ 26 NZ
Qoyska 4 (saddex xisaab dheeraad ah)
Qoyska 5 (afar xisaab dheeraad ah)
Free $4.99, £ 4,99, ama € 4,99 bil kasta $ 9.99, £ 9.99, ama € 9.99 bishiiba
Play files deegaanka aad telefoonka gacanta
N IYO IYO
N N IYO
Hab offline aad telefoonka gacanta
> Resource > Spotify > Imisa Qiimaha Spotify